သတင်း - တိကျမှန်ကန်သောကိရိယာတန်ဆာပလာနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများ၏အဖြေ
တိကျသော tool ကိုမှိုနှင့်ပတ်သက်။ မေးခွန်းများကိုအဖြေ
ဖြေ - ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းရဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ အဆက်မပြတ်ထိုးနှက်နိုင်သည့်ထုတ်ကုန်များ (ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အတူ) အလိုအလျှောက်သေခတ်စက်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာ - နှစ်ဖက်နှစ်ဖက်ကပ်ကပ်ကပ်၊ ပျံ့နှံ့သည့်စာရွက်၊ အီလက်ထရောနစ်ဒေတာထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုသောရောင်ပြန်; တစ်ခုတည်းသောကုန်ပစ္စည်းဌာနသည်ဟာ့ဒ်ဝဲလာကြတယ်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ကန်၊ အရောင်သေတ္တာဘီယာစက်၊
၂။ Tool မှိုနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်နည်း။
အဖြေ - ယေဘူယျအားဖြင့်ဖောက်သည်၏ပုံဆွဲခြင်းများနှင့်ပန်းချီကားများအရ (၁: ၁) ကိရိယာတန်ဆာပလာပြုလုပ်ရန်။ (တိကျမှန်ကန်မှုလိုအပ်ချက်မြင့်မားသည်မဟုတ်လျှင်နမူနာများကိုပေးနိုင်ပါသည်) ။ ဖောက်သည်မှဖြတ်ထားသောပစ္စည်းများ၏အထူနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများသည်သေဆုံးသူ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆုံးဖြတ်သည် (ဥပမာ - ဓား၏အမြင့်၊ တစ်ဖက်ဓါး၊ အမြင့်နှင့်အနိမ့်ဓါး၊ နှစ်ကြိမ်ဓါးထိုးသည့်ဓားစသည်) ။
အဖြေ - ကိရိယာတန်ဆာပလာသည်မတူညီသောဂရပ်ဖစ်အမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးထုတ်ကုန်သည်းခံမှုသည် ၀.၀၃ မီလီမီတာအတွင်းတိကျနိုင်သည်။ ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ၊ အီလက်ထရွန်နစ် gasket၊ အရုပ်ကစားစရာများ၊ self-adhesive နှင့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ ၂၄ နာရီလည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အရည်အသွေးနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသေချာစေသည်၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီပေးပို့ခြင်း။
4. tool ကိုမှို၏ထုတ်လုပ်မှုသံသရာ?
A: အရေးပေါ်အမှာစာမှာကုန်ပစ္စည်း၏အရွယ်အစားအရ၊ အမှာစာလက်ခံရရှိပြီးနောက် (၄) နာရီအလိုတွင်ပို့ဆောင်ရန်စီစဉ်ထားသည် (ဈေးနှုန်းအတည်ပြုချက်ကိုပြန်လည်ပေးပို့သည်) ။ သာမန်အခြေအနေများအရကုန်ပစ္စည်းကိုနောက်တစ်နေ့တွင်ပေးပို့နိုင်သည်။
5. tool ကိုအတူနက်ရှိုင်းသောထိန်းချုပ်မှုလာကြတယ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေသေ?
အဖြေ: ဒီစာမေးပွဲအတွက်စာရွက်အလွတ်ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်စာမေးပွဲဖြစ်ပြီး၊ စွဲသေဆုံးနိုင်သောအမြင့်သည် ၂ မီလီမီတာရှိသည်။ အကယ်၍ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသည်အလွန်ထူ။ ခဲယဉ်းပါကအပေါက်ဖောက်ရန်ဖွင့်လှစ်။ ကွာဟမှုအလွန်ကျဉ်းသည်ဆိုပါက၎င်းကိုစွဲသောကိရိယာမှိုကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ ပျက်စီးနေသောစွဲကိရိယာမှို၏ပြုပြင်ထားသောဓါးကိုပြန်လည်ပြုပြင်။ မရပါ။ ထို့အပြင်ထွင်းရန်အတွက်ထုထည်မှိုများကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်။
(က) EVA အမြှုပ်၊ ရေမြှုပ်၊ ပလတ်စတစ်အမျိုးစုံ၊ မိုက်ခရိုစာရွက်၊ လျှပ်ကာပစ္စည်းစသည်တို့စသည်တို့ကိုထွင်းထုရာတွင်အသုံးပြုသောအက္ခရာတင်စက်ကိရိယာကိုသုံးနိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဓါးနှင့်အပေါက်အပေါက်များအတွက် 0.6 မီလီမီတာ။ အမြင့်နှင့်အနိမ့်ဓါး၊ တစ်ဖက်တည်းဓါး၊ အမျိုးမျိုးသောဓါးအမြင့် (ဥပမာ ၈ မီလီမီတာ) သည် ၅ မီလီမီတာနှင့်အထက်ရှိနိုင်သည်။ အကြီးမားဆုံးအားသာချက်မှာပုံနှိပ်ချိန်များသည်မြင့်မားပြီးဓါးသွားကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်။
post အချိန်: အောက်တိုဘာ -20-2020
ဓါးမှို၏နားလည်မှု: အောင်နှင့် ...
ဖုန်း (0086) 186-8244-3350
လိပ်စာ: အမှတ် ၄၇၊ Futang လမ်း၊ Tangxiachong အသိုင်းအဝိုင်း၊ Yanluo ခွဲ၊ Bao'an ခရိုင်၊ ShenZhen, Guangdong, China
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှထွက်သော Rotary Die, သံမဏိထွင်းထုခြင်း, ထုထည်ဖြည့်သည့် Auto-Material Die, ကြေးမုံမျက်နှာပြင်အက္ခရာတင်ခြင်းသေသည်, လေဆာသေဆုံးသည်, မျက်နှာဖုံး Rotary Die,